Vanhurume Vokurudzirwa Kuchecheudzwa muZimbabwe
A soldier in Harare waits for a surgical circumcision at a local clinic at the start of a campaign to lower the prevelance of AIDS in sub-Sharan Africa on Thursday, Oct. 28, 2010 .
WASHINGTON — Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzinoti kuchecheudzwa kwevanhurume kunobatsira zvakanyanya mukuderedza kutapuriranwa kwechirwere cheHIV/AIDS uye zvinobatsirawo zvikuru mukuderedza gomarara repamuromo wechibereko kumadzimai.
Asi kutambirwa kwechirongwa chekuchecheudzwa kwevanhurume kuchiri kunetsa muZimbabwe nedzimwe nyika sezvo varume vakawanda vachiri kuzengurira nezvikonzero zvakasiyana siyana.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika, Mukudzeyi Mukombe, kana kuti Jah Prayzer, mwedzi wapera akave mumwe wevanhu vane mukurumbira zvakanyanya munyika mushure mekunge azvipira kuti ange achinochecheudzwa.
Jah Prayzer, uyo akatora mikombe mina panyaya dzekukwenya magitaremumakwikwi e 2014 National Arts Merit Awards, anoti akachecheudzwa senzira yekuchengetedza hutano hwake uye hwemudzimai wake.
Chirongwa chekuchecheudzwa kwevanhurume chakatanga kukurudzirwa zvakasimba nesangano reWorld Health Organisation, WHO, mugore ra2007.
Pasi pesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rino reUnited Nations, bazi reWHO ndiro rinotarisa nyaya dzezvehutano munyika dzose richishanda nemamwe masangano akasiyana siyana.
Sangano reWHO muna 2007 umu rakaisa Zimbabwe pakati penyika dzinofanira kupihwa rubatsiro rwemari yekubatsira muzvirongwa zvekuchecheudzwa kwevanhurume.
Izvi zvakatevera tsvakiridzo dzenyanzvi munyaya dzezvehutano, idzo dzakaburitsa pachena kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzainge dzakatarisana nedambudziko guru rekurwisana neHIV/AIDS.
Zimbabwe yakatangawo iri pamusorosoro zvichitariswa huwandu hwevanhu vaibatwa nechirwere ichi pasi rose asi mazuva ano Zimbabwe iri kuonekwawo senyika iri kuita zvakawanda mukurwisa dambudziko iri.
Mashoko eWHO haana kuwira pasi. Vane tsiye nyoro vakabva vatanga kupa nyika dzekuchambembe kweAfrica mari vachikururudzira vanhurume kuti vaende kunochecheudzwa nemadhokotera.
Izvi zviri kuitwa munyika dzakaita seSouth Africa, Malawi, Zambia, Lesotho neSwaziland.
Ongororo dziri kubva kunyika idzi kuburikidza nesangano reWHO dzinoratidza kuti vanhurumene vachiri kuzengurira kuenda kunochecheudzwa.
Asi mutevedzeri wemukuru wesangano rePopulation Services International muZimbabwe, PSI, Doctor Karin Hatzold, vanoti sangano ravo riri kushanda nevanhu vane mukurumbira vakaita saJah Prayzer kuti vadzidzise vechidiki zvakakoshera nyaya yekunochecheudzwa.
Doctor Hatzold vanotiwo sangano ravo richapinda muzvikoro kunotaura nevechidiki nezvenyaya iyi vachivakurudzira kuti vachecheudzwe.
Mumwe anotsinhira mashoko aDoctor Hatzold ndiVaBlessing Chebundo, avo vaimbova nhengo yeparamende yeMDC-T varizve sachigaro weZimbabwe Parliamentarians Against AIDS avo vakatungamira nhengo gumi dzedare reparamende muna 2012 kuti dzichecheudzwe.
Danho rakatorwa naVaChebundo nevamwe vavo munguva iyi rakapembedzwa nevakawanda pasi rose kusanganisira vaimbova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Amai Hillary Clinton.
Amai Clinton vakati VaChebundo nevamwe vavo vainge vaita zvinodadisa zvikuru.